पक्राउ पर्‍यो बबरमहलमा बम पड्काउँने पापी | paniphoto
पक्राउ पर्‍यो बबरमहलमा बम पड्काउँने पापी	paniphoto / June 27, 2012 /5Comments याद गर्नुस् त, बबरमहलको आयल निगमको कार्यालय अगाडी बम पड्केको घटना । २०६८ साल फाल्गुन १५ गते अर्थात २०१२ फेब्रुअरी २७ का दिन सिंहदरबार छेउको बबरमहलमा बम पड्किएको थियो । तिनजनाको मृत्यु हुने गरि गराइएको सो विष्फोटनमा सम्लग्न अन्य ६ जनालाई भने घटनाको केही दिनमै प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको थियो । तर घटनाको मुख्य योजनाकार मानिएको राजकुमार तामाङ उर्फ देवराज लामा उर्फ विश्वक्रान्ति भने फरार थियो । प्रहरीले घटनाको करिब ४ महिनापछि गएराती उसलाई पनि पक्राउ गरेको छ । बबरमहलमा बम पड्काएपछि भारतको सिक्किममा लुकेर बसेको र केही समय पछि नेपालको पुर्वी पहाडमा उसको पार्टीको संगठन विस्तार गर्दै गर्दा पक्राउ परेको प्रहरीले बताएको छ । पक्राउ परेको तामाङ संयुक्त जातिय मोर्चाका प्रवक्ता तथा विदेश बिभाग प्रमुख रहेको छ । उसलाई पाँचथरको लुमु्रपा-२ स्थित भुसपाते लेकबाट पक्राउ गरेर बिराटनगरमा सार्वजनिक गरिएको हो । पक्राउ पछि उसले बबरमहल घटना आफुले गराएको स्विकार गरिसकेको छ ।
पक्राउ परेपछि उसको बयान सुन्नुस् न । घटना चै उसैले गराएको हो रे । तर मान्छे मार्ने गरि चै हैन, आयल निगमले भाउ बढायो भनेर घटाउँन पो रे । त्यत्रो मान्छे हुलका हुल हिड्ने बाटोमा शक्तिशाली बम राखेर मान्छे मार्न होइन भन्दा कसैले पत्याउला ? दुईचार जना मारेर अपहरण र अरु गुण्डागर्दीमा आफ्नो बार्गेनिङ बढाउँन पावर देखाएको हो भन्ने कसलाई थाहा नहोला र ! तर नेपाल हो, विगतमा संलग्न नभएको कुनै पार्टी छ जस्तो छैन । संविधान सभाको निर्वाचनमा काठमाण्डौंबाट चुनाव लडेको मान्छे पनि हो । के थाहा झुक्किएर पो रै छ भनेर भोली छुट्न बेर छैन, हैन त ?
Tags: पक्राउ पर्‍यो बबरमहलमा बम पड्काउँने पापी / Posted in: समाचार/विश्लेषण
naya nepal says: June 27, 2012 at 8:43 pm / Reply
अब गृहमन्त्रि नै डाका छ ..डोन डोन त साथी हुन्छ क्यारे ..अब गणेश लामा को POWER बाट छुट्छ होला नि …तर नेपाल POLICE लै मुरी मुरी धन्यवाद छ ..मलाई त पुरा मुख छाडेर एस्लाई गाली गर्न मन थो नि क गर्नु कमेन्ट नै छापिदैना फेरी ..
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00 ram karki says: June 27, 2012 at 9:03 pm / Reply
एस्ता मान्छे धेरैले मारेका छन
सबै उस्तै हुन् ताक परे तिवारी नत्र गोतामे/
.प्रहरीले सबै ज्यानमारा सामाको भा गरेछा भन्न हुन्थ्यो.धेरै ज्यानमारा सभासद भएर
खाका छन्. बिचरो भोटेको कोहि रहेनछ
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00 केशब रिमाल says: June 27, 2012 at 10:00 pm / Reply
साला गधालाई । बम हानेर पनि भाउ घट्छ । कस्तो वाइयात कुरा गरेको । जिवनभर जेलमा कोच्नु पर्ने । कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00 रमा says: June 27, 2012 at 11:03 pm / Reply
धन्न पक्राउ पर्यो कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00 Sheela Bista says: June 30, 2012 at 4:01 pm / Reply
अब यसले आफ्नो गल्ति हो भनि सके पछी पनि अदालतमा मुद्दा चलाउनु पर्छ कि पर्दैन ?